Ciidamo kala dhexgalay beelaha ku dagaalamaya Gobolka Galgaduud (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ciidamo kala dhexgalay beelaha ku dagaalamaya Gobolka Galgaduud (SAWIRRO)
Ciidamo kala dhexgalay beelaha ku dagaalamaya Gobolka Galgaduud (SAWIRRO)
Ciidanka Kumaandooska Gorgor ayaa la wareegay amniga deegaanka Kaxandhaale ee Waqooyiga Gobolka Galgaduud, ka dib markii ay ku dagaalameen beelo halkaasi wada degga.
Deegaanka Kaxandhaale oo dhaca galbeedka Degmada Balanballe ayaa waxaa maalmihii ugu dambeysay ku dagaalamayay dad reer miyi, sida uu sheegay Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle.
Wasiirka ayaa sheegay inay Galmudug waddo dadaalo ay ku dhexdhexaadineyso maleeshiyada labada beelood, isagoona dhinacyadaasi ugu hanjabay in gacan bir ah u adeegsan doonaan, haddii aanay xabadda joojin.
Wasiirka ayaa wax nasiib darro ah ku tilmaamay dagaalada ku soo noq noqday deegaanada u dhaxeeya Degmooyinka Balanballe iyo Guriceel.
“Nasiib darro weyn weeye oo deegaankaasi ku soo noq noqota, waana nawaaxiga Balanballe, Guriceel iyo aagagaas u dhaxeeya weeyaan. Dad halkaasi wada degan oo walaalo ah ayuu dagaalka dhex maray. Run ahaantii wuxuu ahaa dagaal aad iyo aad nooga nixiyay.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiir Falagle oo ka waramayay waxa dagaalkaasi uu salka ku hayo ayaa yiri “Dalka abaar xoog lahaa ku dhacday, marka deegaankaas asaga ah oo roobabkii ku soo hormareen, oo meelo fog fog la isaga yimid oo si wanaagsan loo daaqayay ayaa mashaqadaasu dhacday, waana soo laa-laabatay.”
Inta laga warqabo lix qof ayaa ku dhimatay dagaalkan, tiro kalena way ku dhaawacantay, sida ay dadka deegaanka u sheegeen Madaxtooyada Galmudug.
Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Galmudug, Booliska iyo Nabad Sugidda Galmudug ayaa Xoogaga Gorgor ku wehlinaya deegaankaasi, waxayna haatan ku howlan yihiin qorshihii lagu kala rari lahaa maleeshiyada labada dhinac, oo ku sugan goobo aan ka fogayn goobihii ay ku dagaalameen.
Previous articleNin la dhashay Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo lagu dilay dalka Turkiga
Next articleRa’iisal Wasaare Abiy Ahmed oo ku laabtay furinta dagaalka